Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 12.04 Precise Pangolin | Site na Linux
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 12.04 Precise Pangolin
Ubuntu 12.04 Pangolin hụrụ ìhè ụbọchị ole na ole gara aga. Dị ka anyị na-eme na ntọhapụ ọ bụla nke ọgba aghara a, lee ụfọdụ ihe ị kwesịrị ime mgbe na-eme a ndozi site na mbido.
O yikarịrị ka mgbe ahapụchara Ubuntu 12.04, mmelite ọhụrụ nke nchịkọta dị iche iche na-abịa na onyoyo ISO nke ekesara site Canonical apụtala.
Ọ bụ nchekwa nke ngwungwu ngwanrọ nke enweghị ike ịgụnye na nkesa Ubuntu maka ebumnuche dịka ikike nwebisiinka iwu, ikikere ma ọ bụ ikike patent. Gụnyere mmemme dịka: Google-Earth, Opera, Win32codecs, Msfonts.
sudo -E wget --output-document = / etc / apt / sources.list.d / medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs) .list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --gbunyeghi ikike akwadoro medibuntu-keyring && sudo apt-get -nwelite melite
Gbakwunye ngwugwu Medibuntu na Ubuntu Software Center:
sudo apt-nweta ngwa-ntinye-data-medibuntu apport-hooks-medibuntu
Ngwaọrụ kachasị ewu ewu maka ịhazi Ubuntu bụ Ubuntu Tweak. Ihe ijuanya a na - enye gị ohere “ige” Ubuntu gị wee hapụ ya otu ọ masịrị gị.
MyUnity na-enye gị ohere ịhazi Unitydị n'otu dị mfe.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale Gnome 3.2 na Gnome-Shell, kama ịdị n'otu.
Ọ bụrụ na ị kpebiri ịwụnye Gnome Shell, ị nwekwara ike ịmasị wụnye ndọtị Gnome Shell 3.2.
Ndepụta zuru ezu nke ndetu aha ọhụụ, yana nkọwa dị nkenke nke nrụnye ha dị na Jụọ Ubuntu.
Y’oburu na ibu onye huru menu nke uwa n’anya n’achoghi gi FreeOffice Anaghị m akwado ya, m mepere ọnụ wee dee ihe ndị a:
sudo apt-nweta wụnye lo-menubar
Nke ahụ kwesịrị idozi nsogbu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 12.04 Precise Pangolin
Nke ahụ bụ nlezianya anya, You're bụ ọkachamara na-ede blọgụ. M sonyeere ndepụta gị ma na-atụ anya maka ịchọta nke nnukwu post gị. Ọzọkwa, ekekọrịtala m weebụsaịtị gị na netwọkụ mmekọrịta m
ebe obibi m :: ndiegwu
Ezigbo Sir Ka anyị jiri Linux, Achọrọ m ịma ma m nwere ike ịwụnye ihe nchịkọta C maka microchip PIC microcontrollers
Ezigbo ọdịnaya, ọ ga-amasị m ịma otu esi etinye usoro cube, nke na-eme ka ihuenyo pịa alt + taabụ na-ebugharị ihuenyo ahụ na tebụl na-agagharị dị ka cube plz email m jhsantonio@gmail.com
na a na-akpọ cube compiz, enwere ike itinye ya na synaptics, iji nwee ike iji ya nke ọma ị ga-enwerịrị ikike mmetụta 3g na vidiyo vidiyo gị, ị ga-etinyerịrị onye njikwa ahụ
Zaghachi john jairo
Peeji a dị ebube n'ezie. daalụ ebe a achọtara m ọtụtụ ngwọta. Tinyekwuo ọtụtụ ihe ọmụma gị,
Zaghachi Carlos Cox
Lee ka o si abara gị uru!
Ajụjụ enyi ... M na-etinye Ubuntu Server ma ana m enweta ozi na mmemme ahụ enweghị nwa akwukwo maka nrụnye .. dịka m chọrọ ịwụnye njikọ a site na igwe ọzọ:
na ndị na-esonụ na-egosi:
Enweghị ike ịkpọchi ndekọ nchịkwa ha (/ var / lib / dpkg /), ma eleghị anya ụfọdụ usoro ndị ọzọ na-eji ya?
ị nwere ike ịgwa m ihe na-eme maọbụ ọ bụrụ na ị nwere azịza ọ bụla ..
O nwere ike ịbụ na ahịa ubuntu mechiri na mberede mgbe ị na-etinye ihe na mgbe ahụ ehichapụghị faịlụ ndị na-egbochi ntinye nke mmemme.
Iji dozie nsogbu ahụ, naanị ị ga-emepe ọnụ ma banye:
sudo rm / var / lib / apt / anatara / mkpọchi
sudo rm / var / lib / dpkg / mkpọchi
Mee ka m mara ma ọ bụrụ na edoziri nke ahụ.
ekele ihe niile na-aga n'ụzọ zuru oke 🙂
Ee !! Ezigbo, ekele. Chineke na-agọzi gị (Ntuziaka: Tinye ntinye-Mas-Utils na ndị ọkwọ ụgbọala)
ekele maka onyinye the na-arụ ọrụ dị ukwuu
Zaghachi Erk Mart
ndi eze g. ndanda dijo
Daalụ enyi, SITE SAN CARLOS COJEDES VENEZUELA, B AM M ONYE NA-ECHICHE, BECR AR NA-adịbeghị anya rutere LINUX UBUNTU
KA HA KWURU N’ASU ANGLO-SAXON. JISODE ỌR YOUR ỌR YOUR Gị.
EZE NDAND EBERE
Azịza ndị eze g. ndanda
Nchịkọta dị mma maka anyị bụ ndị na-amalite na Linux, enwere m ajụjụ ma ọ bụ, Ọ bụrụ na nke a dịkwa maka Kubuntu? n'ihi na m ghọtara na ha bụ otu nkesa ahụ mana naanị ihe na-agbanwe bụ desktọọpụ KDE maka Gnome.
Di omimi dijo
ụfọdụ ihe ee, na ndị ọzọ mba, ọtụtụ oge nchịkọta ndị a na-akpọ dị iche iche na àgwà na-adịghị zutere ... enweghị na-aga ọ bụla ọzọ ... ịdị n'otu na kubuntu adịghị adị
Enyi ekele gị Eziokwu bụ na achọrọ m ịmalite na Ubuntu na mbipute 12.04 tls dị mma maka novice, achọrọ m ịwụnye ya na diski niile mana ịdebe akwụkwọ mmeri m bụ nke ziri ezi ị maara ụfọdụ akwụkwọ gbasara ya.
Na-ekele Julio Paez Venezuela
o nyeere m aka nke ukwuu !!! daalụ
Zaghachi Jonathan Samuel Soto Montes
dị ezigbo mma ,, ma enwere m nsogbu na ubuntu, bụ na OS enweghị nchapụta, na anaghị m ahụ ihe ọ bụla azịza m nwere ike inye?
Ndewo. Lee mgbe m ga-etinye ihe ọkpụkpọ ọkụ na ọdụ ahụ ma ọ jụọ maka paswọọdụ, ọ gaghị ekwe ka m dee ya, kedụ ihe m ga-eme?
Zaghachi Andres Florez
Daalụ nke ukwuu. Ugbu a Ubuntu m bụ penny ma ọbụlagodi na Unity dị ụtọ karịa. Cheers
Zaghachi Echazarret @
kelee otu puku
Zaghachi ka jaime melara
Daalụ maka ịme sọftụwia na - akwụghị ụgwọ maka ihe ọhụrụ. O siri ike iche n'echiche nnukwu ọrụ ị na-ejere obodo a. DAALỤ !!!
nanị MAGNIFICENT, ekele maka onyinye !!
ị bụ makina !!!
naanị ihe m na-achọ, na m nwere ihe ncheta, nke m na-anaghị echeta site n'oge ruo n'oge.
Daalụ nke ọma !!
Ana m asị gị nnọọ! Mmakụ! Paul.
nwere repositories ka "emelitere" na-emepụta ọgba aghara na ha ga-ejedebe ịtinye OS kwa ọnwa 3. nke ahụ adabaraghị onye ọ bụla,
Zaghachi ubuntu 12.04
Daalụ! Cheers! Paul.
na n'ikpeazụ sudo rm -rf /
oroma nkịrịsị dijo
Daalụ maka nkuzi ahụ, ọ gara nke ọma
M ss dijo
Ihe ndị a bụ nkwupụta echiche dị iche iche nke ndị kwesịrị ekwesị maka ịda mba. Maka ndị na-amaghị, etinyela iwu a maka na ọ na-ekpochapụ usoro mgbọrọgwụ. Zụrụ onwe gị ụbụrụ, gil!
miguel na-abanye dijo
nnukwu enyemaka !! Anọ m na-ala azụ n'etiti ubuntu na mint n'ihi kodeks ahụ, maa ubuntu ma kelee gị nke ukwuu
Zaghachi ka akara ngosi miguel
Ugbokodo 2009 dijo
Ezigbo ihe ị na-akọwa ma gosi, na ihe niile nabatara ,: Ọ masịrị m: ...
Ndị ọrụ ibe m nwere olileanya na ị nwere ike inyere m aka ...
Eziokwu bu na ike gwuola m nke otutu nsogbu m nwere na Ubuntu 12.04, eziokwu bu achoghi m ilaghachi na windo.
M weghachitere ubuntu 12.04 n'ihi na enwere ụfọdụ njehie na mbinye aka (eziokwu ahụ abụghị nke ọma ihe ọ pụtara) na naanị ihe dakwasịrị m bụ ịwụnye OS 12.04 ọzọ na-enwe olileanya na a ga-edozi ihe niile na m ga-enwe obi ụtọ ya na ubuntu ozo.
Ugbu a ọzọ ọ dara ọdịda na eziokwu bụ na amaghị m ihe m ga - eme ọzọ ... Enwetara m njehie ndị a (1) mgbe m gbalịrị imelite site na njedebe na mmelite na nwelite n'ihi na enweghị m ike imeghe njikwa mmelite , synaptic na ngwanrọ ngwanrọ.
(1) W: Njehie mere n'oge nnabata akara aka. Ebe nchekwa ahụ adịkwaghị n'oge ma a ga-eji faịlụ ndozi ochie. GPG njehie bụ: http://extras.ubuntu.com Kpọmkwem ntọhapụ: firlọ ọrụ ndị a enweghị isi: BADSIG 16126D3A3E5C1192 Ubuntu Extras Archive Automatic Signing Key
W: GPG njehie: http://ppa.launchpad.net Kpọtụrụ mwepụta: ụlọ ọrụ ndị a enweghị isi: BADSIG 5AF549300FEB6DD9 Launchpad PPA maka Florian Diesch
W: GPG njehie: http://ppa.launchpad.net Kpọghe mwepụta: Thelọ ọrụ ndị a enweghị isi: BADSIG 6AF0E1940624A220 Launchpad PPA maka TualatriX
W: Enweghị ike inweta http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/Release
Ana m ekele gị n'ọdịnihu maka nkwado gị.
Dị ka akwụkwọ ozi ahụ kwuru, enwere njehie na akara 57 nke
M meghere ọnụ wee dee iwu na-esonụ iji mepee faịlụ ahụ na gedit site na iji ikike nchịkwa:
Mgbe ahụ, ị ​​ga-eme ka nhọrọ ahụ lee nọmba ahịrị. Lee na menu gedit (Enweghị m ya arụnyere ugbu a ma enweghị m ike icheta site na obi, mana echere m na ọ bụ usoro Nhazi)
Ozugbo ahịrị nọmba, lelee akara 57.
Detuo ya ma zipu ya ebe a ka anyi hu ihe na-eme. Ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa anyị ụdị distro na ụdị ị na-eji.
Diego Mahecha M. dijo
Mgbe m nyere sudo apt-nweta mmelite m nwetara nke a:
E: Ahịrị ederede 57 dị na ndepụta /etc/apt/sources.list (ntughari), E: Enweghị ike ịgụ ndepụta nke isi, E: Enweghị ike ịkọwa ma ọ bụ mepee ndepụta ngwugwu ma ọ bụ faịlụ ọkwa. Ichọta m chọpụtara na ịza ajụjụ na ahịrị 57 ga-arụ ọrụ mana ọ nweghị ihe ọ bụla.
Nke ahụ nwere ike na-eme?
Zaghachi Diego Mahecha M
N'ikpeazụ mgbe ụbọchị gbalịsiri ike na nke a. Naanị budata Ubuntu 12.04 ISO, bufee site na CD, ma kwadoo OS nyere m ihe ọzọ iji wepu 12.04 ahụ na-ezighi ezi ma tinyeghachi ya ọzọ. Ihe kacha ju m anya bụ na na mgbakwunye na idozi ahụhụ niile ahụ ọ debere ọtụtụ atụmatụ dị ka koodu anaghị egbochi, asụsụ dị na Libre Office na ọtụtụ ihe ndị ọzọ zọpụtara m ịme ya ọzọ!
Ndewo Gumax, enwere m nsogbu a… ọ bụ usoro niile mana mgbe m na-amanye nsụgharị na ndị ọzọ ọzọ naanị 295.40 na nsụgharị abụọ 295.53 pụtara mana enweghị 295.33 ma enweghị m ike ịhụ otu m ga-esi ebu ya. Ọ ga-amasị m ịmata ma ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla gbasara otu esi edozi nsogbu a ebe ọ bụ na achọchara m na weebụ ma enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla.
Uhmmm .. iche na mgbe m jiri Ubuntu m mere ya n'ihi na ọ dị mfe ịwụnye ma ọ bụ ya mere m ji kwado ya, n'ihi na ahazila ọtụtụ ihe. M wee gbaara Ubuntu ihu na Debian. Nke ha gwara m na ọ bụ ihe siri ike ịhazi ya. Uhmmm, ọzọ, enyi enyi enyi maka ndị na-abịa n'ihi etu o si dị mfe iji wụnye, echere m na ọ bụghị ọzọ. Mana ọ bụ ezigbo ahụmịhe ịhapụ ya ma kwaga na distro ọzọ.
Daalụ! Aga m emetụ ihe aka ugbu a.
ọrụ dị ebube
Erick na-anagide dijo
Daalụ na nke a bụ 100% bara uru ma na-arụ ọrụ ...
Zaghachi Erick CoPe
Ezigbo nkuzi, ọbụlagodi na m na-atụ uche Ubuntu 10.10 na m malitere na ụwa nnwere onwe ma ugbu a enwere m Linux Mint 13 ọ gaferela m nke ọma mana agaghị m echezọ 10.10.
Ezigbo ozi, daalụ nke ukwuu.
Ezigbo nkuzi, ana m ekele gị nke ukwuu
Zaghachi Manuel Fernández
Great, n'ezie daalụ nke ukwuu, ị nyeere m aka nke ukwuu, ibe a dị mma.
Ekele unu sitere na HONDURAS NILE Unu.
Zaghachi Gabriel Guerrero
achọrọ m ịmụ ihe, a na m esi na windo na-aga Linux Linux. Daalụ, ozi ọ bụla baara m uru
Daalụ, daalụ, Ama ahụ nyeere m aka nke ukwuu
Zaghachi daniel villatoro
Daalụ nke ukwuu, eziokwu bụ ọkwa ọla edo. Akwadoro nke ọma maka ndị na-amalite na Ubuntu
Ndewo ụtụtụ ọma, ọ na-eme na m wụnye ubuntu n'oge ọ malitere ma bido mmemme ahụ, ọ jụrụ m aha njirimara na paswọọdụ.
M tinye aha m tinyere na ya resective paswọọdụ na ọ na-egosi isiito@ubuntu.com: - $ gini ka m ga eme
Zaghachi na isii
Ndewo, ekele maka ọkwa gị, ana m agwa gị mgbe m tinyere ama na Ubuntu 12.04 ọ naghị amata ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya.
Naanị m chọrọ ịsị daalụ!
Ana m asị gị nnọọ! Cheers! Paul.
[GADKWUO !!! Ọ D AL MMA !!!] Laa na ochie ụzọ, ndị blog na zuru Mbugharị ... ọzọ